osteoporosis ခေါ် အရိုးပွရောဂါလို့မှတ်ကြပြီး အရိုးများပွပြီးပါးလာကာ အရိုးကြံ့ခိုင်မှုလျော့နည်းပြီး သိပ်သည်းဆကျဆင်းလာတဲ့ရောဂါမျိုးပါ။ အရိုးပွရောဂါခံစားနေရသူတွေမှာ အရိုးကျိုးနိုင်ချေပိုများပြီး ကျိုးတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ကာ နာကျင်မှုနဲ့ နိစ္စဓူ၀လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရိုးပွရောဂါဟာ အသံတိတ်ရောဂါတစ်မျိုးလို့ ခေါ်လို့ရလောက်အောင်ကို အတော်များများက သတိမထားမိတဲ့ရောဂါမျိုးဖြစ်ပြီး အနည်းငယ်ထိခိုက်မိရုံနဲ့အရိုးကျိုးမှာသာ သတိထားမိကြတဲ့ရောဂါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလူတွေမှာ osteoporosis ပိုဖြစ်တတ်သလဲ?
အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာတဲ့သူတွေမှာ အရိုးပွရောဂါပိုဖြစ်တတ်ပြီး အသက်၅၀ကျော်အရွယ် အမျိုးသားများမှာ ၅ယောက်မှာ ၁ယောက်က အရိုးပွရောဂါခံစားရတတ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာတော့ ၃ယောက်မှာ ၁ယောက်က အရိုးပွရောဂါခံစားရတတ်ပါတယ်။
osteoporosis ကြောင့် ဘယ်အရိုးတွေကျိုးတာ များလဲ?
အရိုးပွပြီးအကျိုးများတဲ့အရိုးတွေကတော့ မတော်တဆချော်လဲရင်း ကျိုးတတ်တဲ့အရိုးတွေဖြစ်တဲ့ တင်ပါးဆုံအရိုး၊ လက်ကောက်ဝတ်အရိုးနဲ့ ကျောရိုးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောရိုးကတော့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းအလေးချိန်ရဲ့ဝန်ကို ထမ်းထားရတဲ့ပင်မအရိုးဖြစ်တာကြောင့် ပိုကျိုးလွယ်ပြီး ခါးနာတာကို သာမာန်သာ သဘောထားရာကနေ ခါးရိုးကျိုးတဲ့အထိပြင်းထန်နိုင်တဲ့ရောဂါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
လူ့အရိုးများဟာ မွေးထဲကဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာမှုက အသက် ၂၀လောက်မှာ အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိပြီး အဲ့ဒီ့အချိန်မှာ အသိပ်သည်းဆုံး၊ အခိုင်မာဆုံးနဲ့ အရိုးကျိုးဖို့မဖြစ်နိုင်ဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာအရိုး tissue အသစ်တွေက အဟောင်းများကိုတောက်လျှောက်အစားထိုးပေးနေတာဖြစ်ပေမယ့် အရိုးပွရောဂါခံစားနေရတဲ့သူများမှာတော့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အရိုး tissue အဟောင်းများနေရာမှာ အရိုး tissue အသစ်အစားမထိုးနိုင်တာကနေ အရိုးများပွလာ၊ ပါးလာတာတွေဖြစ်လာပြီး အရိုးကျိုးဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူလာတာဖြစ်ပါတယ်။
osteoporosis ကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ?
အရိုးပွရောဂါကိုကာကွယ်ရာမှာ ရောဂါကိုစောစောစီးကြိုတင်သိရှိဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ကြိုတင်သိရှိမှသာ ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ကုသမှုတွေ၊ မတော်တဆမချော်လဲမိအောင်ဂရုစိုက်တာတွေပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေမှာ အရိုးကျန်းမာရေးကို မ ဟော်မုန်းက တာဝန်ယူထားတာဖြစ်လို့ သွေးဆုံးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ဟော်မုန်းအစားထိုးတာကစလို့ အရိုးအထောက်အကူပြုအားဆေးများသုံးစွဲတာများစတာတွေကို ပြုလုပ်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များနဲ့တိုင်ပင်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါတယ်နော်
ဒေါင်းရန် (For Android)
MPT နဲ့ဆို 1877 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးတော့
Telenor နဲ့ဆို 8877 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
#HOPE#HealthCare#Osteoporosis See less
May 24, 2022 Health, Health Tips, Healthy Lifestyle
အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုး ကာကွယ်ကြမယ်…
လူကြီးလူငယ်မရွေး ဖြစ်တတ်တဲ့ လိပ်ခေါင်းရောဂါ